जबकि धेरै क्यानाडाहरू निश्चित रूपमा द्विभाषी हुन्, उनीहरूलाई अंग्रेजी र फ्रांसीसी बोल्नु आवश्यक छैन। तथ्याङ्क क्यानाडाले 200 भन्दा बढी भाषाहरू जुन अंग्रेजी, फ्रेन्च वा मूल भाषा होइन, थिएनन् भने प्रायः घरमा वा मातृभाषाको रूपमा बोलेको भाषाको रूपमा रिपोर्ट गरिएको थियो। उत्तरदायीहरूको दुई-तिहाईका बारेमा यी कुराहरु मध्ये एक कुरा बोल्नु पनि अंग्रेजी वा फ्रांसीसी भाषामा बोल्दछ।
क्यानाडामा भाषाहरूमा जनगणना प्रश्न
क्यानाडाको जनगणनामा एकत्र गरिएको भाषाहरूमा डेटा संघीय र प्राविधिक कार्यहरू दुवैलाई लागू गर्न र व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै संघीय क्यानेडियन चार्ट राइट्स र फ्रीडिम्स र नयाँ ब्रन्सविक आधिकारिक भाषा अधिनियम ।
भाषा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ जुन स्वास्थ्य सेवा, मानव संसाधन, शिक्षा र सामुदायिक सेवा जस्ता समस्याहरूसँग सम्झौता गर्दछ।
क्यानाडाको सर्वेक्षकको 2011 जनगणनामा, चार वटा प्रश्नहरू भाषामा सोधियो।
प्रश्न 7: के यो कुराकानी कुराकानी गर्नको लागि यो व्यक्ति अंग्रेजी वा फ्रांसीसी राम्रोसँग बोल्न सक्छ?
प्रश्न 8 (क): यस व्यक्तिले प्राय: घरमा कुन भाषा बोल्दछ?
प्रश्न 8 (बी): के यो व्यक्ति घरमा नियमित आधारमा कुनै अन्य भाषाहरू बोल्छ?
प्रश्न 9: बचपन मा घर मा पहिले यो सिक्न यो व्यक्ति को भाषा के छ र अझै पनि बुझ्छ ?
प्रश्नहरूमा थप विवरणहरूको लागि, 2006 को जनगणना र 2011 जनगणनाको बीचको परिवर्तन र प्रयोग विधिविधि, तथ्याङ्क कन्ट्रीट, 2011 तथ्याङ्क क्यानाडाबाट तथ्याङ्क क्यानाडा हेर्नुहोस्।
क्यानाडामा गृहमा बोलिएका भाषाहरु
क्यानाडाको 2011 जनगणनामा, लगभग395मिलियन क्यानाडाको क्यानाडाको जनसंख्या 200 भन्दा धेरै भाषाहरू घर वा मातृभाषामा बोल्ने भाषाको रूपमा रिपोर्ट गरियो।
क्यानाडाहरूको पाँचौं वा लगभग 6.8 मिलियन व्यक्तिको बारेमा, अंग्रेजी वा फ्रान्सेली, क्यानाडाका दुइवटा आधिकारिक भाषाहरूको तुलनामा मातृभाषाको बारेमा रिपोर्ट गरियो। लगभग 17.5 प्रतिशत वा 5.8 मिलियन व्यक्तिले भने कि उनी घरमै कम्तीमा दुई भाषा बोल्थे। क्यानाडाका मात्र 6.2 प्रतिशतले अंग्रेजी वा फ्रान्सेली भन्दा घरको भाषामा मात्र भाषाको रूपमा भाषा बोलेको थियो।
क्यानाडामा सरकारी भाषाहरू
क्यानाडाले संघीय स्तरमा अंग्रेजी र फ्रेन्चमा दुई आधिकारिक भाषाहरू छन् । [2011 जनगणनामा, 17.5 प्रतिशत वा 5.8 मिलियनले रिपोर्ट गरे कि तिनीहरू अंग्रेजी र फ्रांसीसी भाषामा द्विभाषी थिए, त्यसोभए उनीहरूले अंग्रेजी र फ्रान्सेली दुवैलाई कुराकानी गर्न सक्थे।] यो क्यानाडाको 2006 जनगणनामा 350,000 भन्दा कम वृद्धि भएको छ। , कुन तथ्याङ्क क्यानाडा क्यूबेकर्स को संख्या मा वृद्धि को विशेषता हो जो अंग्रेजी र फ्रांसीसी मा एक वार्तालाप गर्न को लागी रिपोर्ट को रिपोर्ट। क्युबेक भन्दा अन्य प्राचालकहरूमा, अंग्रेजी-फ्रान्सेली द्विभाषीवादको दरले थोपा थोपायो।
लगभग 58 प्रतिशत आबादीले भने कि उनीहरूको मातृभाषा अंग्रेजी थियो। अंग्रेजी पनि 66 प्रतिशत जनसंख्याले घरमा बोलाइएको भाषा पनि थियो।
लगभग 22 प्रतिशत आबादीले भने कि उनीहरूको मातृभाषा फ्रान्सेली थियो, र फ्रान्सेली भाषामा प्रायः 21 प्रतिशतले बोलाइएको भाषा थियो।
लगभग 20.6 प्रतिशतले सूचित गर्यो कि अंग्रेजी वा फ्रान्सेली भन्दा अन्य भाषा तिनीहरूको मातृभाषा थियो। तिनीहरूले पनि रिपोर्ट गरे कि तिनीहरूले घरमा अंग्रेजी वा फ्रेन्च बोल्थे।
क्यानाडामा भाषाहरूको विविधता
2011 जनगणनामा, क्यान्सरको छानबिन ठूलो जनगणना महानगरीय क्षेत्रहरू (सीएमए) मध्ये अधिकांशले घरमा प्रायः अंग्रेजी, फ्रान्सेली वा बहुभाषी भाषा भन्दा अन्य भाषाको बारेमा बोल्ने व्यक्तिहरूको आठौं प्रतिशत भने।
टोरन्टो: टोरन्टोमा लगभग 8 लाख मानिसहरुले घरमा एक आप्रवासी भाषा बोल्दै भनिन्। यो शहरको आबादीको लगभग 32.2 प्रतिशत र वैंकूवरमा लगभग2पटक धेरै पटक छ जसले जसले एक आप्रवासी भाषा बोल्ने व्यक्तिलाई घरमै प्राय: रिपोर्ट गर्यो। सबैभन्दा साधारण भाषा क्यानोनीज, पंजाबी, उर्दू र तमिल थिए।
मोन्ट्रियल:6969 को बारे मा मोन्ट्रियल मा रिपोर्ट गरियो कि एक आप्रवासी भाषा मा अक्सर घर मा बोलते हो। लगभग तेस्रोले अरबी (17 प्रतिशत) र स्पेनिस (15 प्रतिशत) बोले।
वैंकूवर : वैंकूवरमा, 712,000ले एक आप्रवासिक भाषामा प्राय: प्राय: घरमा बोल्ने बताए। पंजाबीले 18 प्रतिशतमा सूची बनायो, पछि क्यानोनीन, मन्डारिन र तागालोग। कुल जनसंख्याको 64.4 प्रतिशतको लागि कुल खाताहरू प्रायः घरमा यी पाँच भाषाहरू मध्ये एक बोल्ने गर्छन्।
कैलगरी: कैलगरीमा, 228,000 मानिसहरूले घरघरमा प्रायः एक आप्रवासी भाषा बोल्ने बताए। पंजाबी (27,000 मान्छे), तागालोग (लगभग 24,000), र लगभग 21,000 मा गैर-विशिष्ट चिनियाँ बोलचालहरू प्रायः रिपोर्ट गरिएका थिए।
एडमन्टन: एडमन्टनमा , 166,000ले ती देशको लगभग 47 प्रतिशतका लागि हिन्दू भाषा, पंजाबी, तागालगायत, स्पेनिश र क्यान्सरसँग घरमा प्रायः एक आप्रवासी भाषा बोल्ने बताएका छन्, एक प्रतिशत कैलगरीसँग समान छ।
ओटावा र गेटिनाउ: यस जनगणनाको बारेमा 87 प्रतिशत मानिसहरु महानगरीय क्षेत्रमा आएका थिए जसले प्रायः घरघरमा एक आप्रवासी भाषा बोल्ने गरी ओटावा र अरबी, चिनियाँ (गैर-निर्दिष्ट भाषा) मा रहेका थिए, स्पेनिश र मन्डारिन प्रमुख प्रवासी गृह भाषाहरू थिए। Gatineau मा, अरबी, स्पेनिश, पुर्तगाली र गैर-निर्दिष्ट चिनियाँ भाषाहरू मुख्य गृह भाषाहरू थिए।
क्यानाडामा प्रचलित भाषाहरू
क्यानाडामा मूल भाषाहरू विविध छन्, तर उनीहरूले स्पष्ट रूपमा फैलिएका छन्, 213,500 मानिसहरूले मातृभाषाको रूपमा 60 वटा मूल भाषाहरू र 213,400 प्रतिवेदन रिपोर्ट गरिरहेका छन् जुन उनीहरूको आदिवासी भाषा प्रायः प्रायः घरघरमा रहेका छन्।
तीन आदिवासी भाषाहरु - क्री भाषाहरु, इनन्चुनिट र आइग्वे - ले 2011 को जनगणना 2011 को जनगणना मा उनको मातृभाषा को रूप मा मूल भाषा को प्रतिवेदन को लगभग दुई-तिहाई बनाइयो।
प्रशिक्षणमा चित्रा स्केटरका लागि आदर्श अभ्यास अनुसूची के हो?
प्लेटो गणतन्त्रबाट गुफाको अलगाव
व्यापार डिग्री संक्षिप्तिकरण
एक निडाइ सूट के हो?
व्यक्तिगत पुर्खा फाइल 5.2
भिटामिन रासायनिक संरचनाहरू
रिहानाको शीर्ष 10 हिप-हप सहयोगहरू
इटालियन Verb Conjugations: Lavare
आठ इंप्रेशनस्टिस प्रदर्शन, 1874-1886
आयोजन र कक्षा कक्ष व्यवस्थापन
गिटारवाद विशेषज्ञहरूको लागि शीर्ष साना उपहार
5 रुपैयाँ को बारे मा Rupi Kaur
सिक्नुहोस् र मसीमा कसरी आकर्षित गर्ने सिक्नुहोस्
मोटो शट गोल्फमा: यो के हो, के यो कारणले
मोशाको पाँच पुस्तकहरू
शुद्ध पदार्थका उदाहरणहरू के हुन्?
दशौं शताब्दीका महिलाहरु
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओस्कर विजेता - 1960 को दशक
रूसी रिवोल्युशनको समय: 1906 - 1913
130 मास पदोन्नतिहरूको सूची (वा गैरअन्टाइन्ट उपनामहरू) अंग्रेजीमा
माथिल्लो सस्ता चाल गीतहरूको '80s
कसरी पारदर्शिता उद्धरण गर्न र